Liyabashonela abangashadile njengoba umnqamulajuqu usondela | isiZulu
Liyabashonela abangashadile njengoba umnqamulajuqu usondela
Umkhwenyana ukhiphe amahlazo kamakoti obemjolela emshadweni
Bamisiwe abafundi abathembisene umshado esikoleni
Bujumbura - Izithandani ezingashadile zibekelwe umnqamulajuqu wokuphela konyaka ka-2017 ukuba zenze ubudlelwano bazo bube semthethweni, kusho uhulumeni waseBurundi.
Uhulumeni uthi lo mnyakazo uyingxenye yokubuyisa isimilo ezweni.
Lo myalo wakhishwa ngoMeyi nonyaka kulandela umkhankaso owawuqhutshwa nguMengameli Pierre Nkurunziza "wokuvuselela isimilo emphakathini" lapho anxusa khona abantu baseBurundi ukuthi batshengisane uthando ngokuthi bashadane.
Kusukela lapho, uhulumeni ulokhu ufake njalo ingcindezi kulabo abangashadile ukuba baphuthume ngoba isikhathi sesidliwe yinja.
UTerence Ntahiraja, okhulumela uNgqongqoshe wezangaPhakathi, ngaleso sikhathi watshela i-AFP ukuthi iBurundi ibhekene nokukhula ngesivinini kwesibalo sabantu ezweni.
OLUNYE UDABA: Nali ithuba lokuzitholela umaqondana olethulelwa uLaMbokazi
Wathi kulokhu basola imishado engekho emthethweni, ukukipita, isithembu, abantu abashada nabantu abaningi ngesikhathi esisodwa kanye "namakhulu ezingane zesikole ezikhulelwayo".
Ngokusho kombiko we-Al Jazeera uMengameli wasayina umthetho lapho uhulumeni uzibophezela khona ekuvikeleni abantu besifazane uphinde uqikelele ekutheni baphila emphakathini onesimilo.
Uhulumeni ugcizelela ekutheni iphepha lomshado liyasiza ekuvikeleni abantu besifazane kanye nezingane zabo, ikakhulukazi uma kuziwa ezindabeni zamafa.
Nokho-ke, abanye bathi lo mthetho omusha womshado ufinyeza amalungelo abanye ezenkolo, amasiko kanye nosikompilo njengoba amadoda anesithembu ekhala ngokuthi ngeke kube kuhle ukuthi umthetho wazise unkosikazi oyedwa kuphela, laba abanye bashaywe ngesithende.
Umbani ubulale izimbuzi ezingu-17
Imvula ihlezi yamukelekile ezindaweni ezishisayo nezomile ezifana neyesifunda iKharas, kodwa lesi senzakalo semvelo sibuye sithwese abalimi nezakhamuzi izinkinga.
Amalungu omndeni womholi weqembu eliphukisayo uMorgan Tsvangirai kubikwa ukuthi avimbela umkakhe u-Elizabeth ukuba amvakashele esibhedlela, bamsola ngokuthi ufuna esinye sezikhulu eziphezulu sithathe izintambo kumyeni wakhe.